Minesweeper. 🥇 Maitiro Ekutamba Minesweeper. Emulator.online
Minesweeper. Yakagadzirwa mumakumi mapfumbamwe nemasere makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, Minefield yakauya kuWindows makumi matatu nerimwe chete mumakumi mapfumbamwe nemaviri uye ichiri kushamisika vatambi vazhinji nhasi. Yayo interface yakachinja zvakanyanya pamusoro pemakore, asi iwo mutambo wehunyanzvi wakaramba wakamira. Ini ndinobheja izvi ndizvo chaizvo zvaunofarira: sezvo zvako zvekare zviitiko zvisina kukuunzira mibairo yakanaka, iwe ungade kunzwisisa zvakadzama maitiro ekutamba Minesweeper.
Ndiwo mimwe yemitambo iyo chero munhu, chero kamwe chete muhupenyu hwavo, akatamba. Yaive yakaiswa mune angangoita ese mavhezheni eWindows anosvika masere, apo Microsoft yakafunga kuibvisa pamwe Kusurukirwa uye zvimwe zvinokuvaraidza zvakagara zvakaiswa pane yako sisitimu yekushandisa pamusoro pemakore. Vamwe vanozvitiwo mugodhiMuchokwadi, uku ndiko kusiana kweiyo (yakanyanya kukodzera mune zvematongerwo enyika) mutambo wakaunzwa neWindows XNUMX iyo yakaratidza zvimwe kana zvishoma zvakanyatsofanana quirks.
Muchokwadi, mune dzidziso yanhasi, ndichaenda kutsanangura mawaniro uye nekutamba Minefield nekutaura nezve yazvino vhezheni yeMinefield yemahara mahara pane Windows XNUMX chitoro, icho chinobata-zvine hushamwari. uye iwe unogona kubatanidza kune Xbox Live kuti ugovane kufambira mberi kwako. Edza uye ndinokuvimbisa kuti hauzombozvidemba! Kana iwe usina kunyatsogutsikana, ini handirege kukuzivisa iwe inoshanda dzimwe nzira dzePC, smartphone uye piritsi. Kuverenga kunofadza uye pamusoro pezvose, nakirwa!
Minesweeper | Minesweeper Pamhepo
Mune yazvino vhezheni yemutambo wakaburitswa neMicrosoft pane ma2 modes aripo: that dzekare, iyo yakatendeka kubereka zvakasarudzika zvePrato fiorito, uye ndeipi ushingi iyo, kune rumwe rutivi, inoratidza zvitsva zvitsva. Ngatitangei neyekutanga, saka iwe verenga iri gwaro.
En Yetsika minefield modhi kune gridhi ye akavhara mabhokisi, iyo inomiririra nzvimbo inogona kuchengeterwa migodhi: kuhwina, unofanirwa kudzima yega yega yega yega isina chinhu nguva pfupi. Mune iyi vhezheni, panzvimbo yemigodhi, iwe unowana ladybugs, asi mashandiro haachinje. Kunze kwekudzima zvikwiriso nekudzvanya (kana pombi), unogona kutara iwo aunofunga kuti ari kuviga mugodhi woavharira, kuti urege kuadzikisa.
Unogona kunama imwe mureza mutsvuku mumabhokisi aya nekudzvanya kurudyi kwembeva kana kubata kwenguva refu: kudzokorora chiito ichi, panzvimbo pemireza, a yero mubvunzo chiratidzo iyo "ichavhura" mataira akasarudzwa uye ikuregedze uwasunungure. Kuti ukunde, unofanirwa kubvisa chimwe nechimwe chengarava chisina zvimbambaira, pasina kubvarura chimbambaira chimwe chete.
Pane matatu matanho ekuomarara kusarudza kubva: kutanga, yepakati y advanced. Kuvasiyanisa iwo huwandu hwenzvimbo uye migodhi mugridhi: mapfumbamwe × mapfumbamwe makwere ane gumi emigodhi mune yekutanga, gumi nematanhatu × gumi nematanhatu nemakumi mana mune yechipiri uye makumi matatu × gumi nematanhatu uye makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mune yechitatu. Iwe unogona zvakare kusarudza kutamba nhanho ne tsika grid, kupi kwekusarudza kuti mangani mabhokisi aunofanira kunge uine altura, paupamhi uye huwandu hwemigodhi kana Coccinelle. Yekutanga sere kana masere misiyano misiyano haisisina mahara.
Mazhinji emabhokisi emahara haana chinhu, asi mamwe ane nhamba 1 kusvika ku6: izvo zvinoratidza kwakakosha, sezvo zvichiratidza kuti mangani mangoda munzvimbo iyoyo. Zvirinani kudzima mabhokisi ari padhuze neaya asina nhamba mukati nekumaka se "ane ngozi" iwo ari padhuze neshanu kana matanhatu. Pamusoro peizvi, iwe unofanirwa kuvimba neako hupfumi, nekuti hapana zvimwe zvakasarudzika matipi kana manomano ekuhwina Minefield. Iyo yakanaka chaizvo puzzle mutambo!
Mode ushingi Icho chinhu chinonakidza chitsva uye chinogona kuonwa semutambo wakasiyana zvachose, kunyangwe ichichengetedza zvimwe zvakasarudzika zvetsika minesweeper. Pano, mugodhi anoita basa rekupfuura nhevedzano yetoni dzakasanganiswa (yega yega inomiririra nhanho) kuchera mabhokisi munzira. Panzvimbo pemigodhi, zviteyeso zvakavanzwa: iwe unotanga ne3 hupenyu uye unogona kuwana yakawanda nekuunganidza moyo. Mari yesimbi inowedzera mamaki.
Iyo yekushambadzira modhi yakashomeka "inoshungurudza" pane yechinyakare, nekuda kwekuti kana iwe ukawana musungo uchine mamwe maviri mikana yekuzadza nhanho. Kuvapo kwemari uye zvimwe zvinhu zvekuunganidza kuti uzarure mamazon mikova (kuenderera muneushingi) inoita kuti chiitiko chemutambo chiwedzere kugutsa: iwo mabhokisi anovhurwa nguva dzese anogona kuve nenhamba yekuzivisa yemisungo iri padyo uye ma mechanics akafanana chaizvo sezvakatsanangurwa kare.
Pamusoro pemari, mucheri anogona kuunganidza goridhe y armas kuuraya vadzivisi uye kuparadza misungo munzira yako: yega yezviito izvi zvinobatsira kuwedzera zvibodzwa zvemutambo. Iko hakuna mireza kana mamaki emubvunzo, asi kune matsvuku uye machena machena ane chiratidzo chechiratidzo, idzo dzine chinangwa chimwe chete uye dzinoitwa nekukenya kurudyi kana kubata kwenguva refu.
Iyo nyowani haina kugumira pano, seMinefield ikozvino inopawo zvimwe matambudziko ezuva nezuva Iwo akavakirwa pane echinyakare akakwana maitiro uye rega iwe ukwire bhodhi remwedzi pamwedzi remabhonasi ayo anogona kushandiswa pamutambo. Aya matambudziko ezuva nezuva anogona kuwanikwa kubva pane peji guru remutambo uye zvinokurudzirwa kuzadza zviito zvakasiyana: kushanda semuenzaniso, mune rimwe dambudziko ungatofanira kumaka migodhi gumi nemireza (pasina kuburitsa chero bhokisi) uye mune imwe kutsika zvimbambaira.
Zvinetso zvinopa 4 nhoo dzendarira, sirivheri, goridhe uye madhaimani, zvinoenderana nekufambira mberi kwemwedzi. Iyo nhanho yekunetseka inoratidza iyo yeiyo yakasarudzika mode - unogona kukunda dambudziko semunhu anotanga, yepakati kana zvimwe nyanzvi.
Pamusoro peiyo mibairo yakasarudzika, iyo inonongedzera kunyanya kune iyo yekutanga vhezheni yemutambo (iyo yandichataura nezvayo munguva pfupi), poindi ndeyekusvika zvinangwa Xbox Live
Ehe, iwe unoverenga izvo chaizvo! Minefield haigone kutambwa paMicrosoft consoles, asi unogona kuwana mapoinzi pane yako Xbox Live account! Zvino, zvakadaro, kutaura kwakaringana: iyo nguva yasvika yekunzwisisa maitiro ekuisa Minesweeper pakombuta yako.
Dzimwe nzira dzeMinesweeper
Iye zvino ndiri kuzotsanangura zvimwe Dzimwe nzira kumugodhi kusarudza kubva kana usiri kugutsikana neMicrosoft Minesweeper.
Minesweeper: Izvo Zvakakosha (Windows XNUMX)
Yekutanga imwe sarudzo yandinofunga ndeye Minefield: izvo zvakakosha, chirongwa chemahara chaunogona kuwana mune yepamutemo Windows XNUMX chitoro uye icho chaunogona kuisa nekudzvanya pane bhatani kuwana. Iko hakuna kwekuwedzera-pakutenga kana kushambadza mumitambo yese. Nekudaro, iyo yeAdvanced mode isipo. Iyo ndiyo yechinyakare maruva meadow ine matatu akafanotaurwa kuomarara matanho uye imwe yakashandurwa.
Izvo zviyero zve grids uye huwandu hwemigodhi padanho zvakaenzana, nekudaro, zvakafanana neMicrosoft Minefield. Iko kusarudzika kweiyo grid inopawo iwo chaiwo iwo maitiro: mazita anochinja, nekuda kwekuti pano unogona kusarudza pakati penzira nyore, media kana zvimwe difícil. in zvisarudzo Iwe unowana matatu madingindira ekugadzirisa iwo magiraidhi emutambo uye mamwe maratidziro ane chekuita neiyo timer, kurira uye iyo yakajairwa mubvunzo mucherechedzo. Izvo zvakakosha chaizvo sekuvimbiswa kwemusoro wenyaya.
Iyi minefield inopa system ye statistic muzvibodzwa zvakawanikwa mumitambo, asi haugone kubatanidza kuXbox Live kuti uvagovane neshamwari: kana uchingoda kutamba Prato Fiorito, handifunge kuti ichi chingave chinetso. Nezve ma mechanics emutambo, mafambiro acho akafanana neaya emutambo weMicrosoft: kubaya kana kubata kuburitsa mabhokisi, kubaya-kurudyi kana kubata kwenguva refu kuimaka. Zvakareruka, handizvo here? Mifananidzo yacho yakanaka chaizvo zvakare.
Minesweeper! (Mahwindo gumi)
Yechipiri imwe sarudzo yandinokumbira iwe, Minesweeper!Iyo yakakodzera kune chaiyo nostalgic minefield. Iwo mavara haanyatsoita akanakisa, asi mutambo unoburitsa zvakasarudzika zvepakutanga zveWindows: nguva dzose uye mumamiriro ese ezvinhu unogona kuzviwana muMicrosoft Store.
Kune mana ma grid (nguva dzose uye mune ese mamiriro akapatsanurwa neyakaenzana yekunetseka), ndiko kuti nyore, medio, difícil y hope dzakaipa. Pano hapana mukana wekugadzirisa zviyero uye huwandu hwemabhokisi achaburitswa hwakanyanya, hwakasiyana zvakanyanya nematanho.
Mune yakapusa yakakwana modhi, iyo gridhi iri masere × mapfumbamwe makwere ane gumi emigodhi; pakati pe10x12 ine makumi maviri emigodhi; mune Zvakanyanya kuoma gumi nemaviri × gumi nemana nemakumi matatu emigodhi uye muNightmare gumi nematatu × gumi nemashanu nemakumi mana emigodhi. Iyo michina yemutambo ndeyekutanga: chero kubaya kana kubata kuburitsa rakakodzera bhokisi, pasina kukwanisa kumaka vafungira. Mutambo wacho unodudzirwa muItaly, asi mu marongero Iwe unogona zvakare kushandura mutauro kana iko kumashure kwehwindo: kuti uwane, zvinongobaya pane iyo icon kabhini iri panzvimbo yepazasi.
Kana iwe ukashandisa Mac, unogona kutamba Minefield nekuisa iyo yemahara app yezita rimwe chete kubva kuMac App Store, iyo iwe yaunogona kuisa nekudzvanya bhatani. Tora / Isa, iri muchikamu chepamusoro kurudyi uye ichizvisimbisa pachayo, kana zvichidikanwa, kuburikidza pasiwedhi ID yako yeApple kana Bata ID (kana Mac yako ine sensor yeminwe).
Mutambo uyu wakangofanana neyakajairwa mugodhi, ine pateni yegumi × gumi nemaviri nemakumi maviri emigodhi. Kugadzirisa marongero emutambo, unofanirwa kudzvanya icon kabhini iri munzvimbo yepazasi uye sarudza icho chinhu marongero kubva pane iyo menyu inovhura.
Maitiro ekutamba Minesweeper Online
Kutamba Minesweeper nekuisa chirongwa pakombuta yako yakapusa, asi ungangonzwa sekutora dhisiki nzvimbo yemutambo iwoyo. Saka wadii kutamba zvakananga online? Pawebhusaiti pane akawanda masayiti anorega iwe uchizviita: chimwe chazvo chiri Minesweeper online iyo zvakare ine yakabhadharwa vhezheni muStore App. Ini ndinosimudza izvi kwauri nekuda kwekuti ine chaizvo zvakafanana magiraidhi uye madhiraivhi senge yekutanga minefield yeWindows.
Iyo nzvimbo iri muChirungu, asi haufanire kuziva mutauro wekutamba. Iwo ma grid ane iwo akaenzana zviyero zveMicrosoft Minesweeper: nekudzvanya pa juego, iri kumusoro kuruboshwe, unogona kusarudza pakati kutanga, yepakati y nyanzvi, dzinoenderana neKutanga, Pakati nepakati uye Nyanzvi. tsika ndeyemhando yakakwana yakagadziriswa, kwaunogona kuseta altura (Kureba) paupamhi (Upamhi) uye zvakare migodhi (Changu). Kumaka a brands pane yako saiti, gonesa iyo chiratidzo chiratidzo.
Iwo mutambo wemakanika anofanoona kuruboshwe kuruboshwe kuti ubudise zvikwere uye kodzero yekumaka iwo: nekudzvanya pa kutonga tarisa pfupiso yemakhibhodi mapfupi uye mafambiro. Sarudzo yacho inonakidza kuona izvo zvinokutendera iwe kufungidzira kana kuregedza iyo grid kubva kune zana muzana kusvika mazana maviri muzana.
Chimiro chehusiku pachinzvimbo, chinja kumashure kwenzvimbo uye udzikise kupenya kwehwindo kuchengetedza simba mukati mehusiku hwese.
Zvakanaka, ndakatsanangura maitiro ekutamba Minefield pakombuta uye online, asi kana iwe waida kuzviita kubva smart phone kana zvimwe piritsi? Usatombo kunetseka: kune akawanda mahara maapplication ayo anorega iwe utambe pane Android uye iOS futi. Vamwe vane kugadzirisa mabhawa!
Minesweeper: Muunganidzi (Android / iOS): Musiyano wemugodhi wemugodhi uyo, kunze kwekunge uine ma grid emhando dzakasiyana kunze kwemakwere kana mawere, anosanganisira mazinga uye akaunganidzwa.
Globesweeper (Android / iOS) - waneta nemaviri-mativi mabhawa? Neichi chishandiso unogona kutamba mumatanho uye machubhu. Musiyano weMinefield zvachose kuyedzwa.
Nyika yemigodhi (Android / iOS) - tenderedza migodhi iri pamepu dzenyika dzepasi pamwe nekusiyana kwenzvimbo yemigodhi iyo inokukoka kuti uongorore geography.
Maitiro ekuisa Minefield paWindows 10
Ini ndakadzidza kutamba, inguva yekutsanangura Maitiro ekuisa Minefield paWindows 10. Mutambo uyu wakasununguka mu Microsoft operating system chitoro, saka zvese zvaunofanirwa kuita kudzvanya bhatani rebhuruu nekunyora kuwana pane iyo yepamutemo Microsoft Minesweeper peji.
Iko kunyorera, sekutaurwa kwazvino, kuri mahara, asi kune zvinobatsira zvakabhadharwa zvemukati zvinogona kuvhurwa mushure mekuisirwa: unogona kunyorera premium kunyorera kwemwedzi pamazana zana nemakumi mana nemapfumbamwe euros kana kwegore pamipfumbamwe.89 euros. Nehurombo, mutambo wacho une zvikwangwani uye zvinomanikidza pano neapo kuti utarise mavhidhiyo ekusimudzira emasekondi mashoma ausingakwanise kudzima. Mhinduro chete yaunoda kupfuura ndeyekunyorera. Mamwe mabhenefiti ebhenefiti mari dzebetsero (dzinova dzematambudziko) uye zvakasarudzika zvinhu zveiyo yakakwana Adventure mode.
Tataura izvozvo, ngatitore matanho! Kurodha pasi kwapera, tanga Microsoft Minesweeper kuburikidza neayo icon muKutanga menyu uye zvakare tanga mutambo mu Classic modhi kana mu Mamiriro ezvekunakidza, wobva wadzvanya mabhokisi akakodzera padanho raunoda rekuoma. kutanga, yepakati kana zvimwe nyanzvi.
Hwindo guru reMinefield, iro rinogona kuwedzerwa kuzere skrini kuburikidza neiyo icon nemiseve miviri kumusoro kwekurudyi, mipumburu yakatwasuka: nekuipurudzira uchienda kuruboshwe, unogona kuwana huwandu pamitambo uye zvibodzwa zveXbox Live zvakawanikwa. Unogona kufamba themes chete neiyo premium yakabhadharwa vhezheni: mune yekutanga vhezheni chete iyo yekumusoro inowoneka.
Nekudaro, kuti uwane iyo yekumigodhi yekumisikidza, unofanirwa kudzvanya pane icon kumusoro kwekuruboshwe uye sarudza chinhu marongero kubva pane iyo menyu iyo iwe yaunofungidzirwa kwauri: izvi zvichavhura padivi pani iyo iwe yaunogona kugadzirisa iyo mutambo sarudzo.
Unogona kugadzirisa vhoriyamu uye kumisa kana kudzima yambiro, nepo iwe uchikwanisa kusarudza pakarepo kana iwe uchida kushandisa kana kwete ini mamakisi emubvunzo. Kana komputa yako ichibvumira, iwe unogona zvakare kugadzirisa touch and the mifananidzo uye iwe unogona kumutsa shanduko ye kutsanya modhi uye / kana mirairo kudzingiswa. Chekupedzisira, unogona kusarudza kudzoreredza zvigadziriso ku kusarudzika kana zvimwe reset nhamba yemutambo.
Chinhu chekupedzisira chandingade kuteerera. Xbox Live- Kana iwe watove wakanyoresa chimiro nekuda kwekuti iwe une Xbox koni, iwe haufanire kuita chero chinhu uye kana iwe uchinge wasvika kumagumo, iwe uchaziviswa pane desktop. Kana iwe usati uine account izvozvi, ini handikupi zano iwe kuti unyore iyo sezvo isingazopihwe mubairo.